လက်ပံတောင်းတောင်စီမံကိန်းရပ်တန့်ရေး သပိတ်စခန်းများ အစိုးရအကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲပြီ | MoeMaKa Burmese News & Media
ယနေ့ (၂၉.၁၁.၂၀၁၂) နံနက် (၃)နာရီမှ စတင်ကာ သပိတ်စခန်းများကို အကြမ်းဖက် စတင်ဖြိုခွဲနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ လုံထိန်း ရဲများသည် မျက်ရည်ယိုဗုံးများ ပစ်ဖောက်ခွဲကာ မီးသတ်ကားမှ ရေပိုက်ဖြင့် လူစုခွဲခြင်းကို စတင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် နံပါတ်တုတ်များဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေသူများနှင့် သံဃာတော်များကို ရိုက်နှက်ခဲ့သည်။ “ကျန်တဲ့သပိတ်စခန်းတွေတော့ မသိဘူး၊ အခု မြင်နေရတာကတော့ သပိတ်စခန်း (၂)ခုကို စပြီး အကြမ်းဖက်နေပြီ၊ အခု ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရသလောက် သံဃာတော် (၁၀)ပါးလောက်တော့ ဒဏ်ရာရသွားပြီ” ဟု သပိတ်စခန်းသို့ ရောက်ရှိနေသူတစ်ဦးက ပြေးလွှားရင်းဖြင့် တယ်လီဖုန်းဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Tags: လက်ပံတောင်းတောင်အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:ဓာတ်ပုံသတင်း	20 Responses to လက်ပံတောင်းတောင်စီမံကိန်းရပ်တန့်ရေး သပိတ်စခန်းများ အစိုးရအကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲပြီ မောင်ပျာလောင် on November 29, 2012 at 11:05 am စစ်ဘီလူးဟာ ခွေးကျင့် ခွေးကြံ ကြံတာဘဲ။ ငါတို့ မှာလက်နှက်ရှိတယ် မင်းတို့ မှာအပ်တစ်ချောင်းတောင်မရှိဘူးဆိုတာ သိလို့ခွေးဇာတ်ခင်းတာဘဲ။ တရုတ်ကြောက် ရောဂါကြီးနဲ့ရဟန်းတွေကိုပါ နှိပ်စက်ထာ လူမဟုတ်ဖူး။ လူလိုစားပွဲပေါ်မှာ ထိုင်ပြီးဆွေးနွေးပါလား။
lwici on November 29, 2012 at 12:37 pm ဒါဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအစိုးရတဲ့လား ရဟန်းသံဃာနဲ့ ပြည်သူတွေကိုကိုနှိပ်စက်ပြီး တရုတ်ကို လင်ငယ်လုပ်ချင်နေတုန်းပဲလား
Ice Cube on December 1, 2012 at 8:08 pm အရင်က စစ်သားတွေကို ဘုန်းကြီးတွေကို သတ်ခိုင်းတယ်၊ အခုတော့ စစ်သားတွေကို ခဏအနားပေးပြီး ရဲတွေ လုံထိန်းတွေကို ဘုန်းကြီးတွေကို သတ်ခိုင်းပြန်ပြီ။ မကြာခင် စစ်သားတွေ ပါ ထပ် အခိုင်းခံရလိမ့်မယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာ ဘုန်းကြီးတွေကို လှူဒါန်းတဲ့အခမ်းအနားတွေ ရုပ်မြင်သံကြားမှာ ပြလိမ့်မယ်။
Hardstone on November 29, 2012 at 12:40 pm Who can say Burma get the peace already ? Because , THE CURSE OF INDEPENDENT
မောင်မောင် on November 29, 2012 at 1:13 pm တစ်နိုင်ငံလုံး၊ တစ်ကမ္ဘာလုံး အလိမ်ခံလိုက်ရပြီး၊ စရိုက်အမှန်တွေ ပြန်ပေါ်လာပြီ။
သိနေတယ်လေ on November 29, 2012 at 1:48 pm ဒါဘာဘဲကွယ်……….
Maung Thein on November 29, 2012 at 2:11 pm How cruel the Ruler is and what kind of direction given them?? what they talk about the country to move on democracy path?? Mr President U Thein Sein you have right to say anything your wish. you are only one can save the country to better future . Save the country with your heart and your love to people. The public are willing to hear from you that you can really take care the people of all our nation , regardless of religion and races . we are very worry about all our people. we share all our people to our sorrow and very sad how the Old thinking of Police did to people. Oh Our Lord and God Buddha , we knew those who he did to others with evil spirit will get as he done to others. but our people are not only hopeless but also helpless in this situation. Just try to release my sorrow to those who can reach and read.
copyenzymes on November 29, 2012 at 3:02 pm hkway myee kaut kyi taut sut .. at last they show their true face …. f__g government they would rather serve china likeadog instead of helping their own people but yes bringing destruction .. “doom bringer”akaung tway .. ps. especially Aung min is worse thanaslut. … sawminnlatt on November 29, 2012 at 4:00 pm very sorrowful — nothing is important than our people
မောင်ကြီး on November 29, 2012 at 5:01 pm ပြောတာတွေလဲ အတော်စုံပြီ။ အမေ တစ်ခုခုတော. ပြောမှဖြစ်တော.မယ်။
Chomar on November 29, 2012 at 5:40 pm သာအေးဦးစီးပီးမီးလောင်ဗုံးတွေပစ်သွင်းဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တာပါ မျက်နှာလိုအားရ၊ခွေးကျင့်ခွေးကြံလုပ်နေတဲ့
iamafool on November 29, 2012 at 7:06 pm ပြောတော့သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တော်တယ်ဆို၊ သူသဘောနဲ့ သူဆုံးဖြတ် နိင်တယ်ဆို၊ ရုပ်သေး သမ္မတ ရုပ်သေး လွပ်တော် လွပ်ထားပေးတာ သဘောပေါက်ပါ နားလည်ပါ
jin_123452003@yahoo.co.uk on November 29, 2012 at 7:07 pm ဒီအခြေအနေမှာနခုခုတော့ပြောသင့်တယ်ထင်ိလု့ပြောလိုက်ပါရစေဗျာ ခုခိုဒီမိုကရေစီစနစ်ဆီသိုံချီတက်နေတဲ့အချိန်
aunghtet on November 29, 2012 at 7:59 pm အမျိုးဖျက်သာသနာဖျက် ဘင်္ဂါလီတွေ အကြမ်းဖက်တုန်းကတော့ သူတို့ပထွေးတွေလို ငြိမ်နေကြပြီး အခုကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတာ ကြတော့
Nway Oo Wai on November 29, 2012 at 8:30 pm Why the government people did not use today’s crackdown method in Rakhine riot?
sansan on November 29, 2012 at 8:38 pm စကားပုံ တစ်ခု ရှိတယ်လေ။
Nway Oo Wai on November 29, 2012 at 8:39 pm We want peace and prosperity. Mr President, please help and save our nation people. We understand , now the government is moving to clean and good governance. According to this mission, all the government personnel should follow good governance rules and conduct.
မောင်မောင် on November 29, 2012 at 10:01 pm သြော်.. တရားကျစရာ.. ရခိုင်မှာ ကုလားတွေ ထင်သလို ဆော်ကားမိုက်ရိုင်းနေတာကိုတော့ ဒီလို အကြမ်းဖက်တဲ့နည်းနဲ့ အဖြေရှင်းရဲခဲ့ဘူး။ အမိန့်မပေးရဲခဲ့ဘူး။ ကိုယ့် မြန်မာအချင်းချင်းတော့ ရက်စက်လိုက်ကြတာဗျာ…
myo on November 30, 2012 at 10:31 am Very stupid behavior
leuuyoung on November 30, 2012 at 7:32 pmွှအဲဒီ ခွေးမသားတွေက ဒီလိုပဲ ကိုက်တတ်တာ အခုမှမဟုတ်ဘူး။
အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) - လက်ဖက်ရည်ရောင်းသမားဘဝမှ နုိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်သုို့	ကာတွန်း ATH - စစ်သား စုဆောင်းရေး	ငြိမ်းချမ်းအေး - ရှက်လို့ရေးတဲ့စာ	ဇော်ထွဋ် - လေဆိပ်	သက်ခိုင် - တမိုးသောက်တဲ့အခါ	ဓမ္မဘေရီ အရှင်ဝီရိယ - အပါယ်နဲ့ဝေးတဲ့လူ	လင်းနွေးအိမ် - ကျောင်းသားဆို စိတ်နဲ့တောင်မပြစ်မှားနဲ့	တူမောင်ညို - စစ် + ခရိုနီခေတ်မှာ ဗိုလ်ကြီး “ကယ်ရီ” ဖြစ်ပြီ	ငြိမ်းချမ်းအေး - ကျနော် မန်ယူပရိသတ် ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်း	ငြိမ်းချမ်းအေး - ဒီမိုကရေစီကို အိုးမည်းသုတ်သူများ	မိုးမခ Kindel Store
လူမှုရှုခင်း ကောက်စာများSFBC Book Drive Donating Children books to Paung De
စာပဒေသာ ကောက်စာများမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကျင်းပပြီးခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲများကို စစ်တမ်းထုတ်ကြည့်ခြင်း - အပိုင်း (၇)
မိုးမခမှာ အသစ်တင်တိုင်း သင့်အီးမေးထဲကို အရောက်ပို့မယ်။ Join 1,274 other subscribers
ကာတွန်း ATH (45)
မိုးမခကို ပေးတဲ့စာ (214)
Cartoon Box (1,412)
Twitter: moemakaနေဝန်းနီ(မန္တလေး) – “မန္တ လေး က စကား” http://t.co/mTyJviN6DQ about2hours ago ReplyRetweetFavoriteငြိမ်းချမ်းအေး – ဒီမိုကရေစီကို အိုးမည်းသုတ်သူများ http://t.co/zSV9ml4HSR about3hours ago ReplyRetweetFavoriteဖိုးထက် – Bucket List အိပ်မက် http://t.co/yfsdbZbK6V about7hours ago ReplyRetweetFavoriteမှိုင်းခေတ်အောင်(ရေကျော်) – “ ၀ိညာဉ်တော်များထံ အပ်နှံခြင်း” http://t.co/YpotFJmJtK about7hours ago ReplyRetweetFavoriteငြိမ်းချမ်းအေး – ရှက်လို့ရေးတဲ့စာ http://t.co/VzhykKPZZ4 about 22 hours ago ReplyRetweetFavorite@moemaka Copyright © 2015 MoeMaKa Burmese News & Media. All Rights Reserved.
By admin မိုးမခမဂ္ဂဇင်း အောက်တိုဘာလထုတ် ထွက်ပြီ၊ (အတွဲ၁၊ အမှတ် ၇၊ ၂၀၁၄) မိုးမခ၊ အောက်တိုဘာ၊ ၄၊ ၂၀၁၄...Read more » Recent CommentsSan Hla Gyi on ဓမ္မဘေရီ အရှင်ဝီရိယ – အပါယ်နဲ့ဝေးတဲ့လူZarni Gyi on တူမောင်ညို – စစ် + ခရိုနီခေတ်မှာ ဗိုလ်ကြီး “ကယ်ရီ” ဖြစ်ပြီZarni Gyi on အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) – လက်ဖက်ရည်ရောင်းသမားဘဝမှ နုိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်သုို့soetint37 on သက်ခိုင် – တမိုးသောက်တဲ့အခါUN-NC on ဓမ္မဘေရီ အရှင်ဝီရိယ – အပါယ်နဲ့ဝေးတဲ့လူသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ စာကို အနည်းဆုံး ၁ ဒေါ်လာ လှူပြီး မိုးမခကို ကူညီပါ	မိုးမခမှာ ကြော်ငြာပါ